Dhageyso:-Shariif Xasan oo Hambaliyey Umada Reer KGS. iyo Wariyaasha Somaliyeed | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dhageyso:-Shariif Xasan oo Hambaliyey Umada Reer KGS. iyo Wariyaasha Somaliyeed
written by warsan radio 01/01/2017
Wadamada caalamka oo dhan ayaa u noqdey sanad cusub,dabaal degyo iyo isu hanbaliyeyna ayaa la is dhaafsanayaa,baraha bulshada ay wararka isku dhaafsadaan waxay yihiin meelaha sanadkan cusub 2017-ka la isku xasuusinayo inuu wanaagiisa ilaahay dadka iyo dalka waafajiyo.
Madaxda caalamka ayaa hanbaliyo diraya,dhanka soomaaliya madaxda dowlada wakhtigooda dhamaanaya iyo madaxda maamul gobaladyeeda dalka soomaaliya ayaa hiigsanaya in sanadkan cusub xaalada dalka hadii ahaan laheyd horumarka wax weyn ay ka badalaan,waliba soomaaliya ayaa sanadkan waxaa u dhalan doonta dowlad cusub oo soomaaliyeed.
Idaacada warsan ayaa siyaabo kala duwan uga hadashey taariikha sanadkii tagey 2016-kii na dhaafey iyo kan cusub ee manta bilowga ah.
Musharaxa weynaha dalka ahna M/weynaha dowlada koonfur galbeed shariif xasan sheikh aadan ayaa noqdey mas,uulkii ugu horeeyey oo sanadkan cusub wareysi gaar ah siiyo idaacada warsan ee magaalada baydhabo,isagoona u hanbaliyey ummada soomaaliyeed.
CodWariyaasha soomaaliyeed waxay kaalin weyn ka qaateen horumarka dalka uu ku tilaabsadey sanadki dhamaadey gaar ahaan wariyaasha deegaanada koonfur galbeed ku dhaqan mar musharaxa madaxweynaha dalk ahna madaxweynaha koonfur galbeed muhiimada dalka ay u leeyihiin wariyaasha ka Hadley wuxuu yiri.
Wareysigan gaarka ah madaxweynaha dowlada koonfur galbeed shariif xasan sheikh aadan idaacad warsan uu siiyey ayaa waxaan ku weydiiney hamigiisa siyaasdeed ee uu sanadkan cusub damac sanyahay madaxweyne shariif xasan sheikh aadan,isagoona baaq dheer u direy uMadda soomaaliyed.
Sikastaba sanadkan cusub ayaa u rajeyneynaa ummdda somaaliyeed inuu u noqdo sanad horumar iyo baraare ku gaaraan,shabakada warbaahinta warsana qeyb weyn ayaa ka qaadan doontaa iyo wariyaasheeda dib u dhiska iyo soo bandhigida wararkan horumarada la xariira
Dhageyso:-Shariif Xasan oo Hambaliyey Umada Reer KGS. iyo Wariyaasha Somaliyeed was last modified: January 1st, 2017 by warsan radio
Dhageyso:-Wareysi Madoobe nuunoow Maxamed Waziirka Arimaha Gudaha KGS,
Wasaarada Awqaafta iyo Arimaha Diinta Soomaaliya oo goordhaw war soo saartay
Maamulka Jubaland oo ka hadlay duqeymo ka dhacay duleedka Bu’aale
Tiro kooban oo Xujey ah Oo Maanta Taagan Buurta-Carafo Si Ay U Gutaan Acmaasha Xajka
Kalkaalisadii ugu horeysay oo magaalada Muqdisho ugu geeriyootay cudurka COVID-19